Ahoana ny naneren’ny propagandy shinoa ny sendikan’ny mpampianatra lehibe indrindra ao Hong Kong holevonina? · Global Voices teny Malagasy
Azon'i Beijing ampanjavonina amin'ny alalan'ny famoahan-kevitra ny fikambanana rehetra
Voadika ny 19 Aogositra 2021 5:01 GMT
Nopihana tamin'ny pejy voalohany amin'ny Wen Wei Po rehefa nanambara ny HKPTU fa holevonina izany. Milaza ny lohateny fa ny mpampianatra no tompon'andraikitra amin'ny famotehan-tenany. Tao amin'ny Hong Kong CitizenNews
Rehefa niasa nandritra ny 48 taona dia nanambara ny fahalevonany tamin'ny 10 aogositra 2021 ny sendikan'ny mpampianatra goavana indrindra ao Hong Kong, Ny Hong Kong Professional Teachers’ Union (HKPTU).
Tonga izao fanapahan-kevitra izao taorian'ny fanafihana maro dia maro nataon'ny fampitam-baovaom-panjakana shinoa. Nahatohina ny vahoaka ny vaovao noho ny fananan'ny sendikà mpikambana maherin'ny 95.000, izay misolotena fahafahakeliny ny 90 isanjaton'ny mpanabe ary heverina ho hery tony fihetsika indrindra amin'ny mpanohana demaokrasia ao Hong Kong. Manome marika izao tranga izao fa tsy mifintina ao amin'ny sehatra politika ihany ny famoretana ataon'i Beijing ao Hong Kong fa mitatra mankany amin'ny vondrona arakasa sy ny sendikàn'ny mpiasa ihany koa — ny fanorenan'ny fiarahamonim-pirenena ao Hong Kong.
Ankilan'ny HKPTU, dia asian'ny fampitam-baovaom-panjakana shinoa ihany koa ny Fikambanan'ny mpisolovava ao Hong Kong, Ny fiarahamonin'ny mpitsara ao Hong Kong, ny fikambanan'ny mpanao gazety ao Hong Kong, ny fikambanan'ny infirmiera ao Hong Kong, ny konfederasionan'ny sendikà ao Hong Kong ary ny maro hafa tsy voatanisa.
Ny HKPTU dia naorin'ilay mpikatroka Szeto Wah tamin'ny taona 1972 ary nanana anjara toerana manandanja ara-panabeazana mahaolompirenena tao Hong Kong rehefa nanomboka ny fitokonan'ny mpampianatra ho setrin'ny fampihenana karama 15 isanjato tamin'ny taona 1973.
Noho ny fijoroany tony fihetsika dia noheverin'ny governemantan'i Hong Kong hatrany ho mpiara-miombon'antoka akaiky azy ny HKPTU amin'ny fampandrosoana ny politikan'ny fanabeazana ao an-tanàna. Na izany aza, niharatsy ny fifandraisana taorian'ny hetsika fanoherana fanerena ny olona haondrana any Shina tamin'ny taona 2019 raha nobedesin'i Beijing ho tsy nahavita nanolokolo ny fitiavan-tanindrazana tao Hong Kong ny sehatry ny fanabeazana.
Nipongatra ny andiam-pamelezana tamin'ny volana lasa teo rehefa namelaka ny sendikan'ny mpampianatra ho ‘fivontosana misy poizina’ tsy maintsy ‘fongorina’ ireo gazetim-panjakana shinoa People’s Daily [Isan'androm-bahoaka] sy Xinhua. Navela ny fanehoan-kevitra tao amin'ireo seha-baovao anankiroa ireo hanondrona ny sendikà ho fikambanana politika nandrisika ny mpianatra hanao herisetra. Namerina izany tsianjerim-piampangana izany ireo seha-baovao mpanohana ireo andian'olona nahazo fahefana ao an-toerana ary ireo mpitari-kevitra kosa nibetroka ny sendikàn'ny mpampianatra ho fototry ny fankahalàna an'i Shina, fototry ny fihetseham-po mirona amin'ny fahaleovantenan'i Hong Kong. Ny ampitso, nanambara ny Biraon'ny Fanabeazana ao Hong Kong fa hanapaka ny fifandraisana amin'ny sendikà, izay midika hoe tsy hifanerasera amin'ny HKPTU ny fahefana ao amin'ny governemanta, ka ao anatin'izany ny fihaonana, fakan-kevitra na fifandraisana.
Notohanan'ny Lehiben'ny Mpanatanteraka ao Hong Kong, Carrie Lam, ny fanapahan-kevitry ny Biraon'ny Fanabeazana tamin'ny 2 aogositra ary nofelahany ny sendikàn'ny mpampianatra ho manao ho laharam-pahamehana ny politika manoloana ny fahaiza-miasa (professionalisme).
Ho fanavotana ny sendikà, namoaka taratasy ho an'ny mpikambana rehetra ao aminy ny HKPTU mampivoitra fa hifantoka amin'ny fahaiza-miasa ara-pampianarana ny vondrona amin'ny hoavy. Niala tao amin'ny Konfederasionan'ny Sendikàn'ny mpiasa ao Hong Kong ihany koa ry zareo.
Na dia nanome antoka ny olompirenena aza ny mpanolotsaina faratampon'ny governemanta, Ronny Tong, fa tsy misy ny porofo fa nanitsakitsaka ny lalànan'ny filaminam-pirenena ny HKPTU, nilaza kosa ny kaomiseran'ny polisy tamin'ny fampitam-baovao velomin'ny fanjakana Phoenix TV tamin'ny 5 aogositra fa ‘hanadihady lalina’ amin'izay mety ho fahadisoana amin'ny fanitsakitsahana ny filaminam-pirenena raha nanontaniana izy amin'ny satan'ny sendikà.
Tamin'ny 10 aogositra, nanambara ny fahalevonany ny sendikan'ny mpampianatra efa 48-taona rehefa nilaza tamin-dry zareo ny solontena tsy ofisialy avy any Beijing fa ‘tsy maintsy mitsahatra tsy misy intsony’ ny vondrona fa raha tsy izany dia hanjo an-dry zareo ihany koa izay nahazo ny Apple Daily, izay nakatona rehefa nanakatona ny kaontiny ny polisin'ny filaminam-pirenena ary nisambotra ireo mpitantana ambony miisa fito ao aminy, amin'ny fiampangana ho miray tendro amin'ny hery vahiny.
Na dia efa nambara aza ny fahalevonany, mbola mitabataba ihany ireo seha-baovaom-panjakana ny hanaovana famotorana feno ny sendikàn'ny mpampianatra amin'izay mety ho fanitsakitsahana ny filaminam-pirenena. Iray amin'ny fiampangana natolotry ny Wen Wei Po miorina ao Hong Kong ny nampindraman'ny sendikà toerana hanaovana fifidianana savaranonando nifanaovan'ny demaokraty tamin'ny taona 2020. Mpikatroka 47 no nampangaina ho niray tsikombakomba hisara-bazana amin'ny fahefam-panjakana na nanatontosa fifidianana savaranonando tamin'ny Jolay 2020 hifidianana izay kandidà hifaninana amin'ny fifidianana mpanao lalàna amin'ny septambra.
Nasongadin'ny Amnesty International ny haavon-tahotra hita taratra amin'ny fanapahan-kevitry ny HKPTU handevon-tena:
Ny halakin'ny fialan'ny sendikan'ny mpampianatra lehibe indrindra ao Hong Kong manoloana ny fitomboan'ny filam-baniny ataon'ny governemantan'i Hong Kong sy foibe shinoa no mandravaka ny haavon-tahotra nahaletra ny sehatry ny fanabeazana ao an-tanàna sy ny fiarahamonim-pirenena amin'ny ankapobeny ao anatin'ny famoretana tsy mety sasatra amin'izay feo manivaka.
Araka ny notondroin'ny Twitterer ao Hong Kong, Wong Kin Cheong, ny famoretana mihatra amin'ny fiarahamonim-pirenena dia hetsehin'ny propagandim-panjakana shinoa:
Teboka iray homarihana: ny lohahevitra fototra eto dia TSY mifandraika amin'ny fijoroana ara-politikan'ny HKTPU na amin'izay nataony na nokasainy hatao. Ny ilaina ifantohantsika dia asehon'ity tranga ity fa azon'i Beijing atao ny mampanjavona IZAY REHETRA mety ho fikambanana amin'ny alalan'ny “famoahan-kevitra ao amin'ny Isan'androm-bahoaka [People's Daily]…
Manana fijery mitovitovy amin'izany ny fanehoan-kevitra avy amin'i Ga Choi Tze ao amin'ny CitizenNews:
Naka politika hitolona amin'ny rehetra manodidina ao Hong Kong ny CCP [AKS]. Tsy mila manao na inona na inona ianao. Rehefa manondro anao ho meloka izy, dia meloka ianao. ‘Tsy mahakasika ny eny ifotony izany fampanjakan-dalàna izany, ny vitsy an'isa kely ihany no ho tratran'izany, sns.’ Lainga ho an'ny ankizy ihany ireny. Eny fa na dia ny fanapahana ny fifandraisana amin'ny vondrona hafa aza dia tsy misy dikany. Eny fa na dia mivadika ho vatana maty aza ianao, dia hangady anao ireo hikapoka anao. Inona ny tsipika mena (fetra tsy azo ihoarana) nitsahin'ny HKPTU? Lazainao fa vitsy an'isa ve ny sendika manana mpikambana 100.000? Ny hany raisiny dia teny vitsy nivoaka tao amin'ny Xinhua sy ny People Daily, avy eo ny Biraon'ny Fanabeazana mihetsika mifanaraka amin'izany. Inona ny fototra ara-pitsarana noraisina? Hatramin'ny oviana moa ny Xinhua sy ny People Daily no lasa mpitsara?
Tamin'ny volana mey, fitsapan-kevitra nataon'ny HKPTU no manondro fa tokony ho 40 isanjaton'ny mpampianatra ao Hong Kong no te-handao ity sehatr'asa ity noho ny tsindry ara-politika. Navoitran'ny mpitarika ny sendikà Fung Wai Wah fa nitongilana ny Biraon'ny Fanabeazana amin'ny fikarakarana ireo fitarainana tsy mitonona anarana manao ho lasibatra ireo mpampianatra pro-demaokraty, nefa tsy noraharahiany ny hevitry ny sehatry ny fanabeazana amin'ny fanovana fandaharam-pianarana ampanaovin'ny fanjakana. Fanampin'izany, misy ireo mpanao lalàna mpiara-dia amin'ny nahazo fahefana miantso ny hasiana fakantsary fanaraha-maso ao an-dakilasy. Miteraka tsindry mafy ho an'ny mpampianatra ireny fepetra rehetra ireny.
Tsy ny fanabeazana irery ihany arakasa misedra tsindry ara-politika. Hatramin'ny nanambaràn'ny HKPTU ny fanafoanana azy tamin'ny herinandro, maro amin'ireo mpaneho hevitra ao amin'ny sehatra fampitam-baovao tantanin'ny fanjakana no miantso ny hanaovana famotorana ny Konfederasionan'ny Sendikàn'ny Mpiasa ao Hong Kong (HKCTU) amin'ny anjara andraikiny tamin'ny fandrindrana ireo hetsika anti-governemanta sy ny lazaina ho amatsiam-bola avy any ampitan-dranomasina. Nomarihan'ny mpaneho hevitra ihany koa ny fitokonana nomanin'ny Federasionan'ny Mpikarakara Mpandeha Fiaramanidina Hong Kong sy ny Fiarahan'ny Mpiasan'ny Hopitaly nandritra ny hetsi-panoherana fandefasana olona any Shina an-katerena tamin'ny taona 2019 sy nandritra ny fanombohan'ny fielezan'ny COVID-19 tamin'ny taona 2020. Samy mpikambana ao amin'ny HKCTU ireo vondrona arakasa roa ireo.
Lasibatra ihany koa ny mpanao gazety sy ny mpahay lalàna:
Ary ny lasibatry ny gazety pro-Beijing manaraka: Fikambanan'ny mpanao gazety fariparitana ho miaro ny fanaovana herisetra sy mampiely tsaho. Misy ireo ExCo lazaina ho “maditra”
Maneho ny heriny ny fampitam-baovaom-panjakana avy ao Shina Entim-Bahoaka amin'ny fifidianan'ny Mpahay lalàna HK sy amin'ny fitifirana ny Fikambanan'ny mpisolovava: “Nampitandreman'ny [Isan'Androm-Bahoaka] tamin'ny sabotsy ny Fikambanan'ny Mpahay Lalàna tsy hilalao politika raha tsy te-hanara-dia ny HKBA sy ny PTU efa maty amin'izao fotoana”.